५.९० अंकले बढ्दा नेप्से १२६४.३६ विन्दुमा, कम मूल्य पर्ने शेयर लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण ५.९० अंकले बढ्दा नेप्से १२६४.३६ विन्दुमा, कम मूल्य पर्ने शेयर लगानीकर्ताहरुको रोजाइमा
on: June 20, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
असार ५, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से ५ दशमलव ९० अंकले बढेर १ हजार २६४ दशमलव ३६ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार २५८ दशमलव ९५ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक अन्तिम आधा घण्टामा यस दिनकै उच्च १ हजार २६६ दशमलव ३३ विन्दुसम्म पुगेको थियो । सो विन्दुपछि नेप्सेमा केहि लगानीकर्ताहरु शेयर विक्री आएकाले बजार थोरै ओर्लिएको हो । कारोबार भएका ११ समूहको परिसूचकमा आठ समूहको परिसूचक बढेपनि समग्र नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको हो । आतवारदेखि बिहीवारसम्मको कारोबारमा नेप्से दुई दिन बढेको छ भने तीन दिन घटेको छ । दुई दिनमा नेप्से ८ दशमलव ५३ अंकले बढेको छ भने तीन दिनमा १३ दशमलव ७९ अंकले घटेको छ ।
बिहीवार रू. ३७ करोड ५३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनका कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. ७ करोड ११ लाख बढी हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन १ दशमलव शून्य ८ अंक बढेर २७१ दशमलव ६० विन्दुमा बन्द भएको छ ।
गुराँस लघुवित्त र मल्टीपर्पसको शेयर मूल्य बढेर सर्किट
बिहीवार गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८७ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ४२३ पुगेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ३८ ले बढेको छ । कम्पनीले हालै आईपीओ जारी नेप्सेमा सूचिकृत भएकाले शेयर माग गर्ने धेरै रहेका छन् । कम्पनीको २ सय कित्ता कारोबार भएको छ । दोस्रोमा ८६५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७७ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. २३६ पुगेको छ । कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने लागेपछि लगानीकर्ताहरुले शेयरको माग बढी गरेका हुन् । जसले शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २१ ले बढ्न पुगेको हो ।
शिवम् सिमेण्टको सर्वाधिक कारोबार
यस दिन शिवम् सिमेण्टको सर्वाधिक रू. ३ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ६५४ पुगेको छ । दोस्रोमा एनसीसी बैंकको रू. २ करोड ६१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । बैंकले दुई आवको लाभांश घोषणा गरेपनि साधारण सभाको सूचना भने हालसम्म सार्वजानिक गरेको छैन । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. २५९ पुगेको छ । कारोबार भएका १७१ कम्पनीमा १०३ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ४२ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २६ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
नेप्सेमा चमत्कार : ५ मिनेटमा ३०.९४ अंकले बढ्यो